प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य को हुन् ? - Dipkhabar - Online News Destination
प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य को हुन् ?
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भीम प्रसाद आचार्यले शपथ लिएका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रस्तावमा आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । राईले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम शेरधन राई नेतृत्वको सरकार विघटन गरी सोही धारा अनुसार आचार्यको नेतृत्वमा पुनः एमालेको सरकार गठन गरिएको हो ।
आजै संसदीय दलको बैठक बसेर आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो ।
को हुन् मुख्यमन्त्री आचार्य ?
धनकुटाको तेलिया गाविसमा २०१६ वैशाख १६ मा बुवा बाला प्रसाद आचार्य र आमा लक्ष्मी देवी आचार्यको कोखबाट जन्मिएका आचार्य हाल सुनसरीको ६ मा बस्दै आएका छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनी २०३२ साल देखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनिति यात्रा तय गरेका थिए । २०३५÷३६ साल विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका आचार्य २०३६ सालमा नै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अनेरास्ववियुबाट स्ववियु चुनावमा सचिव बनेका थिए । २०३८ सालमा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस लैनचौरमा पनि स्ववियु चुनावमा सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।
सोही वर्ष तत्कालीन नेकपा माले तर्फबाट यूथ लिगको सचिव बने । २०३९ सालमा भएको अनेरास्ववियुको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासचिवका निर्वाचित बनेका आचार्य सोही वर्ष नेकपा माले लिडिङ यूथ लिगको सचिव पदमा निर्वाचित बनेका थिए । २०४१ सालमा राजकाज मुद्दा अन्तर्गत २ वर्ष जेल र पटक पटक गरी ११ पटक गिरफ्तार परे ।
२०४४ सालमा नेकपा माले उपत्यका विद्यार्थी क्षेत्र हेर्ने पार्टी जिल्ला कमिटी सचिव र अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेकपा मालेद्वारा गठित प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समन्वय समिति सचिव सोही वर्ष जनआन्दोलनको योजना निर्माणमा संलग्न र सक्रिय सहभागी बनेका थिए ।
२०४७ देखि ५५ सम्म नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका सचिव रहेका थिए । २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बने । २०५७÷५८ मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको सचिव, २०५८ देखि ६५ सम्म पार्टीको कोशी अञ्चल इन्चार्ज सम्हालेका थिए । २०६४ सालदेखि हाल सम्म संविधान सभा सदस्य त्यस्तै २०६५ देखि २०६९ सम्म नेकपा एमाले संसदीय÷संविधान सभा दलको प्रमुख सचेतक बनेका आचार्य २०७० सालमा गठित मन्त्री मण्डलको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए । ।पार्टीको नऔं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सचिव बने । आचार्य हाल नेकपा एमाले प्रदेश १ सङ्गठन कमिटी संयोजक साथै प्रदेश कमिटी इन्चार्ज रहेका छन् । उनकी श्रीमती सहित एक छोरा र एक छोरी छन् ।